एकाएक फेरिएकाे लुम्बिनी प्रदेशकाे राजनीति ,के गर्लान् शंकर पाेखरेल ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsएकाएक फेरिएकाे लुम्बिनी प्रदेशकाे राजनीति ,के गर्लान् शंकर पाेखरेल ?
एकाएक फेरिएकाे लुम्बिनी प्रदेशकाे राजनीति ,के गर्लान् शंकर पाेखरेल ?
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तर्फबाट दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३(२)बाट उपनिर्वाचनबाट विजयी प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
आजैमात्र मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेलले राजीनामा दिएकाे र एकल बहुमतीय सरकार बनाउने एमाले संसदीय दलले निर्णय गरेकाे थियाे । तर, वलीकाे याे कदमसँगै शंकर पाेखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना कम भएकाे छ ।
यसअघि एमालेलाइ सरकार बनाउन ४१ मत आवश्यक रहेकाेमा उसँग ठिक्क ४१ मत नै रहेकाले ढुक्क भएकाे थियाे । तर अब एमालेमा ४० मतमात्र बाँकी भएपछि कसकाे नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ ? भन्ने काैतुहलता उत्पन्न भएकाे छ ।
यता कामचलाउ सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चाैधरीले भने विमला वलीलाइ अपहरण गरी जबरजस्ती विज्ञप्ति निकालिएकाे बताएका छन् ।
Previous articleरूरू जलविद्युतकाे आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत,ओपनिङ रेन्ज कति? काराेबार कहिलेबाट ?
Next article५४ अंकले बढेकाे नेप्सेमा यी हुन सबैभन्दा बढी कमाउने र गुमाउने कम्पनी